Twitter oo Bartiisa Ka Saaraya Badhamada “Retweet” iyo “Like”.. Maxaa Lagu Bedelayaa? – Goobjoog News
ShirkaddaTwitter ayaa doonaysa iney meesha ka saarto badhamada “Retweet“, “Like” kuna bedesho caddeynta tirda dadka hadal-haya mowduuca tweetka.
Website-ka TNW ee arrimaha teknoolajiyadda ka hadla ayaa sheegay in Twitter uu doonayo in badhamada Retweet iyo Like uu meesha ka saaro, waa sida Dan Jackson oo ah afhayeen u hadlay Twitter u sheegay website-ka TechCrunch.
Dan ayaa caddeeyay in twitter uu tijaabo ku wado hadda habkan cusub, iyadoo tiro kooban oo dadka barta adeegsada loo ogaaladay tijaabada cusub, waxaana ka soo muuqaneysa twitter-ka tirda dadka ka sheekaysanaya tweet-ka uu qofi sameeyo, arrintaas oo keenaysa in ay dadku ku dhiiradaan iney si wanaagsan ula falgalaan twitter-ka.
Waxaa la tilmaamayaa in dadka twitter-ka ka shaqeeyaa ay si wanaagsan u ogyihiin in tirada Retweet-ka iyo Like ka aaney si dhab ah uga tarjumayn tirada dadka hadal-haya mowduuca oo xiisaynaysa, waana mid ka dhigaysa taasi in habkan cusubi uu noqdo mid ka fiican kana heer sarreeya habkii hore ee aaney tiro soo muuqaneyn.
Liiska Golaha Wasiirada Cusub Ee Maamulka Hirshabelle